musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Spain icharamba ichipisa muna 2022
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
Zvinonyaradza kuindasitiri yekufambisa kuona kuti vanopfuura zvikamu zvitatu muzvina (78%) zvevatengi vari zvechokwadi, pamwe kana kuti tine tariro yekuenda mhiri kwemakungwa gore rinouya.
MaBrits ane nzara yezuva anoda kudirana achidzokera kuMed zhizha rinotevera, neyakajairwa hotspot yeSpain ichiwanazve korona yayo senzvimbo yedu yatinoda, inoratidza tsvakiridzo yakaburitswa nhasi (Muvhuro 1 Mbudzi) neWTM London.
Chikamu chetatu (34%) chevatengi chiuru vakabvunzwa neWTM Indasitiri Report vakati "vachaenda" zororo mhiri kwemakungwa muna 1,000; vanenge chikamu chimwe muzvina (2022%) vakati "zvichida" kuzviita, nepo vamwe 23% vakati vanotarisira kumbozorora kunze kwenyika gore rinouya. Vamwe 21% vakati vachasarudza pekugara, ukuwo 17% vakati havaronge chero zororo re6.
Nzvimbo yepamusoro yakataurwa nevatengi yaive Spain, vamwe vaine chokwadi chekuti ndeipi nzvimbo yekutandarira yavaida kushanyira, vachitaura zvitsuwa zveSpanish zvakaita seLanzarote neMajorca.
Zvakare pamusoro pechishuwo chechishuwo ndezvimwe zvechinyakare zveEuropean favourites seFrance, Italy neGreece, paine kuratidzwa kwakasimba kweUSA - iyo yanga isiri pamepu yevanoita zororo reBritish kubvira denda rakabata munaKurume 2020.
Zvakawanikwa zvichagamuchirwa nemabhodhi evashanyi anga achikurudzira vatengi nezvezvirongwa zvekufamba zvenguva yemberi panguva yedenda uye zvino taura mazinga akakosha ekudiwa kwepent-up.
Vanopfuura mamirioni gumi nemasere maBrits vakashanyira Spain muna 18, vachiiita kwatinofarira kuenda - asi kambani yekuongorora mafambiro yeForwardKeys yakati nhamba dzakadonha nezvikamu makumi mana muzana muzhizha rino nekuda kwezvirambidzo zveCovid.
Zvichakadaro, vashanyi vanobva kuSweden, Denmark neNetherlands kuenda kuSpain vakaona kukura kwehuwandu hwepre-denda uye kushanya kwepamba kwakapotsa kudzoreredzwa kusvika padanho rekutanga denda.
Hofisi yeVashanyi veSpain kuUK yakati "yakatsunga kuisa Spain pamberi pepfungwa kune maBrits anotarisa kuzororo rekunze" uye kutora mukana wekudiwa kwebhodhoro.
Kutarisirawo kuwana mari pane zvingango bhuka iBrand USA, iyo yakashanda pamwe nevafambisi vevashanyi uye vamiriri vekufambisa muUK panguva yedenda.
Hutongi hweBiden hwanga huchishanda pahurongwa hwaizoda kuti vashanyi vese vekunze varatidze humbowo hwekudzivirira kana zvirambidzo zvekufamba kuenda kuUS zvazobviswa.
Sangano rekusimudzira vashanyi reFrance reAtout France rakabatana zvakare neEuropean Travel Commission (ETC) munaGunyana sechikamu chekuda kukwezva vashanyi vazhinji.
France iri kutarisira kunge iri pamberi pepasi rose mumakore anotevera, sezvo ichatambira rugby union World Cup muna 2023, uye Mitambo yeOlympic neParalympic muParis muzhizha ra2024.
Dare revashanyi reItaly riri kutarisirawo kukwezva mamwe maBrits, kunyanya mushure mekusungirwa kuvharirwa kune vanosvika vakabayiwa zvizere kubva kuBritain kwakaraswa mukupera kwaNyamavhuvhu.
Nekudaro, nzvimbo dzekuenda dzakaita seVenice dziri kutsvaga kupora nenzira yakagadzikana kupfuura denda risati raitika.
Zhizha rino rakaona Venice ichirambidza ngarava huru dzekufamba uye kwave nemishumo yekuti guta rinoronga kutanga kubhadharisa vashanyi kubva zhizha ra2022 zvichienda mberi.
Greece ndiyo yaive nzvimbo yekuenda yakadzora zvakanakisa zhizha rino, sekureva kwekambani yekuongorora data Cirium, iyo yakadzidza nezvendege kubva kuUK kuenda kunyika dzeEurope.
IGreek National Tourism Organisation yakatangawo mubatanidzwa muna Nyamavhuvhu nemutakuri webhajeti Ryanair kusimudzira kwainoenda.
Vachishandisa sirogani 'Chese chaunoda iGreece', vanobatana vakasimudzira zororo rechirimo muzvitsuwa zveGreece kuenda kuUK, Germany neItaly misika.
Simon Press, WTM London, Exhibition Director, akati: "Zvinofadza kune indasitiri yekufambisa kuona kuti vanopfuura zvikamu zvitatu kubva muzvina (78%) zvevatengi zvechokwadi, pamwe kana kuti tine tariro yekuenda mhiri kwemakungwa gore rinouya.
"Brits parizvino yatarisana nemakore angangosvika maviri emhirizhonga yekufamba, zororo remhiri kwemakungwa risiri pamutemo mune dzimwe nzvimbo dzedenda, saka kugara kwakawedzera mukurumbira.
"Kunyangwe rwendo rwekune dzimwe nyika rwekutandara rwakatenderwa zvakare, takanetswa nemitengo inodhura yePCR yekuyedza, mitemo yekuvharirwa, shanduko yezviziviso zvipfupi kumirairo uye inovhiringidza nzira yemagetsi - tisingataure makumi emitemo munzvimbo dzezororo mhiri kwemakungwa.
"Zvinoratidza kusimba uye kutsunga kwemugadziri wezororo rekuUK zvekuti vazhinji vanoramba vachida kubhuka zororo remhiri kwemakungwa muna 2022 - nekunze kwezuva kuchiita sekunge kuri kuyedza mushure meimwe zhizha rekushambidzika muUK."